InfluxDB, loharano malalaka misokatra DB hitantanana angon-drakitra marobe | Avy amin'ny Linux
Darkcrizt | 13/06/2021 10:11 | Nohavaozina amin'ny 14/06/2021 00:12 | fampiharana
Raha ny amin'ny fisafidianana data database ho an'ny tetikasa vaovao na ny efa misy hisolo ilay izay iarahanao miasa, Efa nolazaiko teto tamin'ny bilaogy fa ny tranonkala tsara indrindra hahitana safidy dia DB-Engines, izay ahafahantsika mahita tahiry maro sy marimaritra iraisana ary mino aho fa tsy fantatrao akory ny fisiany.
Fa miroso amin'ny lohahevitra lehibe, Ity lahatsoratra ity izay hiresahantsika anio dia momba ny InfluxDB izay safidy tsara indrindra amin'ny fikirakirana data maro be nefa tsy mila sorona amin'ny zava-bita.
Tokony ho fantatsika fa ny InfluxDB dia tahiry voaatsara ho an'ny angona andiam-potoana ary azo ampiasaina ao amin'ny foibe data na an-toerana na ho vahaolana rahona amin'ny Microsoft Azure, Amazon Web Services (AWS), ary Google Cloud Computing.
Ny tahiry data andiany fotoana (TSDB) dia azo ampiasaina raha tsy misy mpizara ao anaty rahona na miaraka amin'ireo mpizara azy ao amin'ny foibe data. Ny tahiry dia novolavolain'ny orinasa amerikana Influxdata.
Toa fiteny fiteny fandaharana kokoa io fa tsy fiteny fangatahana SQL mihaino amin'ny seranana 8086, miampy InfluxDB tsy misy fiankinan-doha ivelany ary manana lahasa miorina amin'ny fotoana ilaina amin'ny fangatahana firafitry ny angona misy fepetra, andiany ary teboka. Ny teboka tsirairay dia misy tsiroaroa manan-danja izay antsoina hoe fieldset sy timestamp. Rehefa atambatra amina andiana mpivady sanda manan-danja antsoina hoe tag set dia mamaritra andiany iray izy ireo. Ary farany, ny andian-dahatsoratra dia voakambana amin'ny alàlan'ny famantarana kofehy mba hamorona refy.
Ny sanda dia mety ho 64-bit integer, teboka mitsingevana 64-bit, tadiny ary soatoavina Boolean. Ny isa dia voatanisa arakaraka ny fotoana sy ny tag nametraka azy ireo. Ny politikan'ny fitazonana dia faritana amin'ny metrika ary mifehy ny fomba fihenan'ny data sy ny fanesorana azy. Ny fangatahana mitohy dia mandeha matetika ary mitahiry ny valiny amin'ny metrika kendrena.
Raha toa ka tehirizina anaty tahiry ny andiam-potoana, ohatra, rehefa mampiasa fotodrafitrasa Internet of Things, InfluxDB dia azo ampiasaina hamonjy fampahalalana momba ny sensor, ao anatin'izany ny timestamp. Koa satria ny fotoana dia mitana andraikitra lehibe amin'ny InfluxDB, ny serivisy fanaovana fotoana anatiny dia miantoka fa ny teboka rehetra ao amin'ny cluster InfluxDB dia mihazakazaka miaraka. Mazava ho azy, InfluxDB koa dia mety amin'ny fitehirizana angon-drakitra fanaraha-maso amin'ny tambajotram-orinasa.
Ireo tahiry ao amin'ny InfluxDB dia tsy mila sarotra ary manome tsanganana am-polony. Misy dikany ny fampiasana azy amin'ny tsanganana vitsivitsy monja raha toa, ohatra, ny soatoavina refesina sasany avy amina sensor tsy maintsy tehirizina ho toy ny fiasan'ny fotoana.
Raha angona avy amin'ny loharano maro no tsy maintsy raisina sy ampiasaina miaraka, ohatra amin'ny tranga misy sensor, ilaina ny tahiry mifandraika aminy afaka hitantana haingana ireo fangatahana mifanindran-dàlana ireo. Satria matetika ny data dia voaray amin'ny tena izy, ny fanatanterahana ny fanoratana momba ny tahiry dia tsy maintsy ampifanarahana mifanaraka amin'izany. Ankoatr'izay, misy ny fanamby fa ny angona fandrefesana avy amin'ny sensor dia tsy soratana sy faritana tsara foana. Ny tahiry data series dia mbola afaka mitahiry an'ity angona ity sy manao azy misy.
Ankoatra izany, raha vantany vao voatahiry ny angon-drakitra andian-tantara dia mahalana vao ilaina ny manavao azy avy eo. Noho izany dia tsy ilaina ny manatsara ny angon-drakitra andian-dahatsoratra ho an'ity. Ho fanampin'izay, misy ny fiasa takiana mba hamafana na hametahana angona antitra izay tsy ilaina intsony. Ireo asa ireo koa dia ampahany amin'ny fanodinana angon-drakitra haingana.
Ny InfluxDB dia misy singa vitsivitsy ihany izay misy ho an'ny Linux sy macOS. Ny fiasa rehetra dia ao anaty rakitra iray, manamora ny fametrahana sy ny fiasa.
Farany raha te hahalala bebe kokoa momba izany ianao dia afaka jereo ny antsipiriany ao amin'ity rohy manaraka ity.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » InfluxDB, loharano malalaka misokatra DB hikirakirana data maro be
Naharitra mihoatra ny 80 ny mpamorona nanamboatra ny 'korontana' noforonin'ireo mpianatra tao amin'ny University of Minnesota
Ny mpamorona ny Have I of been Pwned dia namoaka ny kaody loharano momba an'io